Golaha Ammaanka oo ka shiray arrinta Soomaaliya, warna kasoo saaray – Calanka.com
Golaha Ammaanka oo ka shiray arrinta Soomaaliya, warna kasoo saaray
in Dibedda — by admin —	February 10, 2021
Muddada xil-heynta madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo afar sano ahayd ayaa ku ekeyd 8-dii bishan Febraayo. Mucaaradku waxay sheegeen in aysan madaxweynaha aqoonsaneyn. Dowladduse waxay sheegtay in madaxweynahu xilka heyn doono ilaa inta laga dooranayo maamul cusub.
Siyaasiyiinta taageersan Farmaajo ayaa ku doodaya in uu weli yahay Madaxweynaha Jamhuuriyadda illaa laga helayo shakhsi xilkaas loo doortay oo si rasmi ah jagada ugala wareega.
Waxa ay xiganayaan xeer ay labada gole ee baarlamaanka wadajir u ansixiyeen 26-kii September 2020, kaasoo dhigaya in “hay’adaha dastuuriga ee dowladda ay xilkooda sii hayn doonaan illaa inta laga helayo hay’ado kale oo bedala.
Beesha caalamka ayaa madaxda Soomaalida ku boorisay in ay sii wadaan wadaxaajoodyada xalka looga gaarayo hannaanka doorashada, si loo hirgaliyo heshiis la isku wada raacsan yahay.
Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli dhawaan uu fashil ku soo dhammaaday shir dhawr maalmood ka socday magaalada Dhuusamareeb, halkaasi oo madaxda Soomaaliya ay uga hadlayeen qaabkii ay doorasho dalka uga dhici lahayd balse arrintaasi ayaa la isku mari waayay.
In kastoo madaxweyne Farmaajo uu soo jeediyay in shirka cusub lagu qabto Garoowe, haddana maamulka Puntland ayaa dhankiisa sheegay in uu ku talinayo in shirkaasi lagu qabto magaalada Muqdisho isla markaana ay ka soo qeybgalaan “saamileyda siyaasadeed iyo beesha caalamka.”
Qoraal la soo dhigay barta Facebook ee madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay “Dowladda waxay soo dhaweynaysaa shirka lagu baaqay 15-ka Febraayo, inkastoo aan lagala tashan in Garoowe lagu qabto.”